Indwangu yokweluka ngombala opinki nge-spandex yabakhiqizi bamasudi nabaphakeli | I-Yun Ai
Indwangu yokweluka ngombala opinki nge-spandex yamasudi
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yokweluka ngombala opinki nge-spandex yamasudi
Singanikela ngenkonzo ephelele uma ufuna ukwenza ibhizinisi nathi, njengokuthola i-ejenti yezimpahla kanye ne-ejenti yokugunyaza amasiko ukungenisa izimpahla ezweni lakho, sinokuthekelisa kuma-coutries angaphezu kwama-40, kunolwazi ngempela ngathi ukuthi sikwenze. Ngaphandle kwalokho, kwi-cusomer yethu ejwayelekile, sivumele ukunweba isikhathi se-akhawunti izinsuku eziningana, kunjalo, kuphela kumakhasimende ethu avamile. Ngaphezu kwalokho, sinelebhu yethu engakuhlolela noma iyiphi indwangu, uma ufuna ukukopisha ezinyeindwangu unayo, sicela usithumelele amasampula.
Ububanzi: 60/61 ”
Into Cha: YA21-168
Ukwakheka: I-59% iRayon, i-29% yeNayiloni, i-12% ye-Spandex
Yelula indwangu ethambile, elungele isudi yowesifazane, ikakhulukazi ibhulukwe lowesifazane, elenziwe nge-rayon, i-nylon kanye ne-spandex. Isisindo 290GSM siyenza idilize kahle futhi ibe namandla aphezulu.
Ukwengezwa kwenayiloni kuyenza iqine, futhi i-spandex iyinika ukuqina. Inomuzwa obushelelezi kakhulu, ogelezayo futhi onethezekile.
Yini enye? Kunemibala eminingi ongayikhetha, hhayi imibala emithathu kuphela njengoba isithombe sikhombisa ngenhla, ungabheka eminye imibala engezansi, usibuze uma unentshisekelo. Ngendlela, intengo yinhle impela ngobuningi obukhulu.